Allah ha u naxariistee Jaamac Saxardiid Yaa dilay?
Taliye ku xigeenkii hore ee Booliiska maamulka Puntland Gaashaanle dhexe Jaamac Saxardiid oo lagu dilay magaalada Boosaaso ayaa ilo lagu kalsoon yahay waxay noo sheegeen, in markii marxuumka Cisbitaalka la geeyey, ka hor intaan qaliinka uu koomada la galay lagu samayn inuu codsaday inay u yimaadaan qaar ka mid ah saraakiisha booliiska iyo denbi baarista puntland , oo uu magacyadooda magcaabay .
Wuxuuna Marxuumku saraakiisha Puntland u sheegay cidda ka danbaysay dilkiisa. iyo meesha loo raacayo hadduu dhinto
Mar caawa aanu la hadalnay qaar ka mid ah laamaha amniga Puntland, waxay sheegeen inay ogyihiin ciddii ka danbaysay dilka Marxuum Jaamac Saxardiid . Sheegashada Alshabaab sheegteen waa naf la caari iyo faan, waxna kama jiraan.
Sidoo kale si marxuumku uuu caddalad u helo, loona maxkamadeeyo qofkii ama kooxdii amarka lagu dilay soo bixiyey waa in fursad iyo wada shaqayn la siiyaa Saraakiishii Puntland ee isaga oo dhaawac ah uu u waramay una sheegay cidda l\_ka danbaysa dilkiisa.
← Obama pauses speech to help reporter Beel Soomaaliyeed oo Xildhibaankoodii la dhacay →